प्रकाशित मिति : ११ फाल्गुन २०७७, मंगलवार ०८:२९
काठमाडौ ।स्वास्थ्य कायम राख्नका लागि तिलको ठूलो महत्व छ । तिलमा पाइने पुष्टिकारक तत्वले शरीरलाई चुस्तदुरुस्त राख्न मद्दत गर्छ ।
तिल मुख्य तिन प्रकार को भेटिन्छ सेतो,कालो र खैरो !
जो सनातन हिन्दुको बैदिक पुजाआजामा अति प्रयोग त हुन्छ नै र यजुर्वेद मा यसको ठुलो महत्व पनि दर्साइएको छ।
पौराणिक कथा अनुसार पहिलो बनस्पति कुस पहिलो अन्न जौ र तेलहनमा तिलको रुपमा मानवजगत लाई भगवानले प्रस्तुत गर्नु भएको उदाहरण हो ।
एउटा भान्से(सेफ) ले खाना पकउनु मात्र होइन पस्कनु मात्र होइन आफुले पस्केको खानाको बारेमा थाहा हुनु पर्छ र बुझाउनु सक्नु पनि पर्दछ ।
तिल खानुका फाइदाहरु-
तिलमा पाइने पुष्टिकारक तत्वले शरीरलाई चुस्तदुरुस्त राख्न मद्दत गर्दछ जसले हाम्रो खाना मा तिलको चट्नी राखिएको हुन्छ ।
तिलमा लेसिथिन भन्ने तत्वो प्रचुर मात्रामा हुन्छ जो दिमाग र आँखा को लागि अति आवस्यक पर्दछ।
फाइबरका त के कुरा गरौ जो तिलमा त हुन्छ नै जसले स्वस्थ पाचन प्रणाली इम्युनिटी पावर बडाउनका लागि मद्दत गर्दछ जस ले गर्दा कब्जियत हुन दिदैन ।
तिलमा पाइने म्याग्नेसियम जसले श्वासप्रश्वासमा हुने ऐंठन हटाएर दम लगायतका रोग लाग्न दिँदैन ।
तिलमा प्रसस्त मात्रा मा कपर हुन्छ जसले बाथजन्य पीडा घटाउँनु को साथै यसले रक्त कोषिका,हड्डी र जोर्नीहरूलाई बलियो बनाउँछ । तिल मा कोलेस्टेरोल हुदैन त्येसैले मुटुरोगी को लागि पनि अति उत्तम हुन्छ ।
१०० ग्राम तिलमा पाइने तत्वमा स्याचुरेटेड फ्याट ७ ग्राम पोली अनस्याचुरेटेड फ्याट २२ ग्राम मोनोस्याचुरेटेड फ्याट१९ ग्राम कोलेस्टेरोल ० सोडियम ११ मिलि ग्राम पोटाशियम ४६८ मिलि ग्राम कार्बोहाइड्रेट २३ ग्राम डायट्री फाईबर १२ ग्राम चिनी ०.३ ग्राम प्रोटिन १८ ग्राम क्याल्सियम ९७५ मिलि ग्राम फलाम १४.६ मिलि ग्राम भिटामिन बी-६ ०.८ मिलि ग्राम तिलको लड्डु बनाएर खाना सक्नु हुन्छ ।
चट्नी त नेपाली भान्सा को अभिन्न अंग हो नै सादेको अचार मा पनि माडा बनाई राख्ने चलन छ ।सातु बनाउदा १ किलो मा ५० ग्राम तिल मिसाउनु भयो भने स्वाद नै गज्जब हुन्छ ! कोदो फापर या चामल को रोटि बनाउदा ज्वानो को साथै थोरै भुटेको तिल मिसाउनु होस् फेरी हेर्नुहोस!
तिलको तेल सलाद मा प्रयोग गर्न सक्नु हुन्छ !मिठाई ,कुकिज र बिस्कुट हरु को त तिल गहना नै हो भन्दा फरक नपर्ला।
त्यसै ले त होला प्राचीन समयमा शरीरलाई सुन्दर राख्न र छालालाई चम्काइ राख्न तिलको तेल प्रयोग गरिन्थ्यो। किनकी यसमा भाइरस, एजिङग तथा ब्याक्टेरिया रहेको हुन्छ जसले शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई रक्षा गर्ने काम गर्छ। यसकारण तिलको तेल पनि स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले अति उत्तम मानिन्छ। आजा पनि मसाज को लागि प्रयोग गरिन्छ
तिलमा पाइने धेरै प्रकारका प्रोटिन,क्याल्सियम, फाइबर, भिटामिन डी, बी कम्प्लेक्स लगायत कार्बो हाइट्रेड सेसमिन नामक एन्टीअक्सिडेन्ट तत्वहरुले मानिसलाई फोक्सोको क्यान्सर, पेटको क्यान्सर,ल्यूकेमिया,प्रोटेस्ट क्यान्सर र ब्रेस्ट क्यान्सर हुनबाट जोगाउँछ।
त्यसै ले “तिल खाऊ स्वास्थ्य रहौ” तिलमा पाइने लेसिथिन दिमाग र आँखाका लागि लाभदायक हुन्छ ।